ငလျင်လှုပ်ပြီဆို ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » ငလျင်လှုပ်ပြီဆို ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ?
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငလျင်လှုပ်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲရက်ပိုင်းလောက် အင်အားအနည်းငယ်ပြင်းတဲ့ ငလျင်လှုပ်သွားတာကိုလည်း မိတ်ဆွေတို့ သိလိမ့်မယ်လို ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ့်တကယ် ငလျင်အန္တရာယ် ကြုံလာခဲ့ရင် ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ အချက်အချို့ကို ဝေမျှပေးသွားပါမယ်။
ငလျင်လှုပ်တဲ့ အချိန် သင်က နေအိမ်အတွင်းမှာပဲ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ခိုင်ခံ့တဲ့ နံရံလို နေရာမျိုးမှာ စားပွဲလိုမျိုး လူဝင်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အမြန်ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါကအမြန်ဝင်ပြီးပုန်းခိုလို့လွယ်ကူပါတယ်။ ငလျင်အရမ်းပြင်းလာခဲ့ရင်တော့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ နေရာ ပစ္စည်းတွေမရှိတဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ နေရာမှာ နေသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကွဲလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အမြန်သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – ဖန်ခွက်၊ ပန်းကန်၊ နာရီ အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေကို အဝတ်ထူထူ/စောင် စတာတွေနဲ့ ပတ်ထားခြင်းမျိုးတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်တဲ့ အချိန်မှာ သင်က အဆောက်အအုံတွေထဲမှာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဆောက်အအုံထဲက အမြန်ဆုံးထွက်ပြီး ဘေးကင်းတဲ့ နေရာမျိုးမှာ နေသင့်ပါတယ်။ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးတွေ ပေါ်မှာရောက်နေခဲ့ရင်လည်း အရေးပေါ်လှေကားကနေ ဆင်းဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ငလျင်လှုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဓာတ်လှေကားနဲ့ မဆင်းဖို့လည်း အကြံပေးပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားဆိုတာ ငလျင်လှုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ အနီးတဝိုက်မှာ ကွင်းပြင်လိုနေရာမျိုးရှိရင် ထိုနေရာမှာ သွားနေဖို့အကြံပေးပါတယ်။
ငလျင်အင်အား အရမ်းပြင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မိသားစုနဲ့အတူ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ အရေးကြီးစာရွက်စာတန်းတွေကိုယူပြီး ပြိုကျနိုင်တဲ့ နေရာတွေနဲ့ဝေးတဲ့ ကွင်းပြင်လိုနေရာမျိုးသွားနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 2:03 am.